मौषम - KHASOKHAS
भोलि दिनभर न्युयोर्कमा हिमपातको सम्भावना, ६९५ नुन छर्ने गाडी तैनाथ
भोलि विहानैदेखि न्युयोर्कमा हिमपात सुरु हुने मौषमविदहरुले अनुमान गरेका छन् । भोलि विहानैदेखि मौषममा वदलाव आई हिमपात र बर्षा हुने अनुमान गरिएको छ । मंगलबार बेलुकासम्म नै यो अवस्था कायम हुनेछ । चार इन्चसम्म हिमपात हुने सम्भावना भएपछि न्युयोर्कका सडकहरुमा नुन छरिएको छ । न्युयोर्क सिटीमामात्र थप नुन छर्नका लागि ६९५ वटा नुन छर्ने गाडीहरु …
Weather Advisory : Snow, sleet and rain may cause significant travel difficulties in NYC
The New York City Emergency Management Department today issuedatravel advisory for Tuesday, February 12. The National Weather Service has issuedaWinter Weather Advisory for New York City in effect from6a.m. Tuesday through midnight. A Winter Weather Advisory means that periods of snow, sleet or freezing rain may cause travel difficulties …
तीन दिनसम्म वर्षा र हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुन सक्ने
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज (बिहीबार)देखि तीन दिनसम्म काठमाडौंसहित देशभर वर्षा हुने र उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आज देशका पश्चिमी क्षेत्रमा हिमपात र वर्षा हुने र राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा बिहानैदेखि पानी पर्ने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । बुधबार राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही पश्चिमका अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र …
शिकागोमा चिसोमा अलपत्र ७० होमलेस होटलमा, बिल तिर्नेले राखे नाम गोप्य
अमेरिकाको शिकागोमा चिसोका कारण अलपत्र भएका ७० जना होमलेसलाई एकजना दानी व्यक्तिले होटलमा लगेर शरण दिएका छन् । होमलेसहरुलाई होटलमा राखेर चिसोबाट बचाउने उक्त व्यक्तिले आफ्नो परिचय भने गोप्य राखेका छन् । आगलागीका कारण शिकागोको होमलेस क्याम्पस खाली गराउनुपर्ने अवस्था आएपछि त्यहाँ रहेकाहरु चिसोमा अलपत्र परेका थिए । स्थानीय हरुले प्रदान गरेको ग्यास सिलिण्डरबाट ताप …
शिकागोको इतिहासमा नै दोश्रो चिसो दिन, नेपाली समेत प्रभावित
बुधबार शिकागोको इतिहासमा नै दोश्रो सबैभन्दा चिसो दिन बनेको छ । सन् १९८५ मा शिकागोको तापक्रम दिउसोमा माइनस २७ डिग्रीसम्म झरेको थियो । बुधबार शिकागोको तापक्रम माइनस २३ डिग्रीसम्म झरेको छ । त्यस्तै सन् १९८२ को मध्यान्हमा शिकागोको तापक्रम माइनस २१ डिग्रीसम्म पुगेको थियो । बुधबार मध्यान्ह शिकागोको तापक्रम माइनस १८ डिग्रीसम्म झरेको छ । …
ज्यानमारा चिसो पूर्वी अमेरिकातिर फैलियो, न्युयोर्कमा माइनस १७ डिग्री अनुभव
अमेरिकाको मध्यपश्चिम क्षेत्रमा आतंक मच्याएको ज्यानमारा चिसो अमेरिकाको पूर्वी क्षेत्रमा समेत फैलिएको छ । अहिलेसम्म ११ जनाको ज्यान लिइसकेको चिसोका कारण बिहिबारमात्र २ हजार भन्दा धेरै उडानहरु रद्द भइसकेका छन् । बिहिवार विहान न्युयोर्कको तापक्रम सेन्ट्रल पार्कमा २ डिग्री फरेनहाइटसम्म झरेको थियो । तर चिसो हावासहित तापक्रम माइनस १७ डिग्रीसम्म अनुभव भएको थियो । दिउसो …
पुस्ताले एक पटक भोग्ने चिसो कहाँबाट आयो अमेरिकामा ?
मौसमविद्हरूका अनुसार ध्रुवीय क्षेत्रबाट दक्षिणतिर आएको हिउँयुक्त वायुको प्रभावका कारण अत्यधिक चिसो भएको हो। उनीहरूले त्यो असरलाई ‘पोलार भोर्टेक्स’ भनेका छन्। त्यसको प्रभावका कारण अमेरिकाका केही भागमा ‘पुस्ताले एक पटक मात्रै भोग्ने’ प्रकृतिको घातक चिसोको असर सुरु भएको हो। ध्रुवीय चिसो हावाले अमेरिकी मध्यपश्चिमी र पूर्वी राज्यका थुप्रै स्थानको जनजीवन ठप्प बनाइदिएको छ। प्रभावित राज्यहरूमा …
खतरनाक चिसो हावा मध्यपश्चिमबाट मैनतिर, २१६ मिलियन प्रभावित
अमेरिकामा बढेको खतरानक चिसोका कारण बिहिबार पनि २१६ मिलियन व्यक्तिले अत्याधिक चिसोको सामना गर्नुपर्ने भएको छ भने ८४ मिलियनले जिरो डिग्री फरेनहाइट भन्दा कम तापक्रमको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । मध्यपश्चिमबाट मैनतिर बढेको खतरनाक चिसो हावा र निर्मम चिसोका कारण अहिलेसम्म अमेरिकामा ११ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने विभिन्न राज्यहरुमा संकटकाल लागु गरिएको छ । …
अमेरिकामा यो पुस्ताले भोगेको सबैभन्दा जाडो, ११ को मृत्यु, तीन राज्यमा संकटकाल
अमेरिकामा वर्तमान पुस्ताले भोगेको सबैभन्दा जाडो भएको छ । चिसोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या अहिलेसम्म ११ पुगेको छ । बुधबार मिनेसोटाको तापक्रम माइनस ६६ डिग्री फरेनहाइटसम्म पुगेको थियो भने विसकन्सिन र आयोवामा माइनस ५८ डिग्री फरनेहाइटसम्म पुगेको थियो । शिकागोको ओहेयर विमानस्थलबाट ७ सय सहित विहिबार विहान २५ सय उडानहरु रद्द गरिएका छन् । इलिनोयमा राज्य …
माइनस ७० डिग्री पुग्दै तापक्रम जम्यो पानी, बढे ज्याकेट लुटेरा
अमेरिकामा दशकौंपछि सबैभन्दा जाडो भएको छ । उत्तरी ध्रुवबाट सुरु भएको समुद्री आँधीले अमेरिकाको मध्यपश्चिम राज्यमा जताततै बरफ जमेको छ । यसलाई ‘पोलर भर्टेक्स’ भनिएको छ ।यसको कारण अमेरिकाका ९ करोडभन्दा बढी जनता शून्यदेखि माइनस १७ डिग्री तापक्रमको जाडो सहन बाध्य छन् । पोलर भर्टेक्सका कारण तापक्रम माइनस ४० देखि माइनस ७० डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने …